CDI မြန်မာကျမ်းစာသင်တန်း Christian Disciple International Singapore
Christian Disciple International
#02-32 Peninsula Plaza
ဆရာချိုမနားလိန်း. ဆရာမဆူဆန် နှင့် သင်တန်းတက်လူငယ်များအား
အပတ်စဉ် တင်္နလာနေ့.. ကြာသပတေး (တစ်ပါတ်၂ရက်)
ည၆နာရီ လာရောက်ပါဝင် နိုင်ပါသည်။
ခါတိုင်းသင်နေတာက Rogma 36 Lessons ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတပါတ်.ကျမ်းစာကျောင်းတိုင်း သက်ကြတဲ့ အနက်ဖွင့်နည်းကို ဒီနေ့ (14.Aug.2017) သင်ကြားပါတယ်။ Counseling အကြောင်းလဲ ဆရာမ ဆူဆန် က သင်ကြားပေး နေပါတယ်။
သမ္မာကျမ်းစာမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ ဆိုလိုရင်း God's Purpose တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ ဖတ်ပြီး မိမိ ကပဲ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်တာမဟုတ်ပဲ သမ္မာကျမ်းစာကပဲ မိမိ ကို နားလည်စေခြင်း တနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်မှ မိမိ ကို အနက်အ္တိပ္ပါယ် နားလည်စေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ပို့ချချက်က John Oakes ပို့ချချက်ကို အသုံးပြုထားတဲ့ Power Point ဖြစ်ပါတယ်။
Hermeneutics အနက်ဖွင့်ခြင်း ကို လူသားတွေအတွက် ဘုရားသခင်က ဂျူးလူမျိုး (အစ္စရေးလူမျိုး) တွေကို အသုံးပြုပြီး ကျမ်းစာ ရေးသားစေပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၄၀ဦး ကျော်က သမ္မာကျမ်းစာ ရေးသားခဲ့ပြီး ဓမ္မဟောင်း ၃၂ ဦး (၃၉ကျမ်း) .. ဓမ္မသစ် ၈ဦး (၂၇ကျမ်း) စုစုပေါင်း ၆၆ကျမ်း ရှိပါတယ်။ ရိုမင်ကာသိုလစ်များက သမိုင်းဆိုင်ရာကျမ်း (ပယ်ကျမ်း Apocrycha) များကိုထည့်သွင်းထားပြီး ဂျူးလူမျိုးများရဲ့ .ဟီဗရူးကျမ်းစာ Hebrew Bible မှာတော့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဂျူးလူမျိုးတွေကို ဘုရားသခင်က အသုံးချ ပြီး ဓမ္မသစ် ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းများ ရေးသားစေပါတယ်။ ဂရိဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့ ဓမ္မသစ်ကျမ်း မှာ တပါးအမျိုးသား ရှင်လုကာ ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပဲ ဂျူးလူမျိုး မဟုတ်ပါ။ ဓမ္မသစ်ကို သခင်ခရစ်တော် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံ . ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး AD 45 မှာ ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ ညီအရင်း ရှင်ယာကုပ် က ရှင်ယာကုပ်သြ၀ါဒ စာစောင် စတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
(စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် ဝီကီလင့်ခ် https://en.m.wikipedia.org/wiki/Bible)
အနက်ဖွင့်ခြင်း . . ဥပမာ နာမည်ကျော် ဆာလံ၂၃ မှာ "ထာဝရဘုရားသည် ငါ၏သိုးထိန်းဖြစ်တော်မူ၏။ ငါသည်ဆင်းရဲမခံရ".. ကျမ်းပိုဒ်ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ ခေတ်ကာလ ဒါဝိတ်မင်းကြီးခေတ်မှာ . . ငါ၏သိုးထိန်း ဆိုတဲ့ စကားက. .ငါ၏အရှင်သခင် ဘုရားသခင် ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ဆင်းရဲမခံရ..ဆိုတာ တချို့ တလွဲ ဖွင့်ဆို ဟောပြောကြတယ်။ "ခရစ်ယန်များ ချမ်းသာရမယ်။ ကျန်းမာရမယ်" ဆိုပြီး လွဲမှားစွာ ဟောကြတယ်။ ကျမ်းစာက အဲဒီလို အနက်မဖွင့်ပါဘူး။ လုံလောက်စွာ ကြွေးမွေးမယ် Surfficient, Provide လို့ အနက်ဖွင့်ပါတယ်။
ရေးတဲ့ခေတ်ကာလရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ Culture နဲ့ စာပေ Literature တွေကိုလဲ လေ့လာရပါသေးတယ်။ အနက်ဖွင့် Hermeneutics ခြင်းမှာ , မူရင်းအဓိပ္ပါယ်မပျက်ခြင်း Exegesis, ဟောကြားဖို့အသင့်ဖြစ်ခြင်း Homiletics , မူရင်းမပျက်ပဲဘာသာပြန်ခြင်း Eisegesis တို့ကို ရှင်းပြပါတယ်။
နှစ်ခြင်းခံပြီးရင် ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီ လို့ လွဲမှားစွာ သွန်သင်မှုများလဲ ကြောက်စရာပါ။ အခုခေတ်မှာ သမ္မာကျမ်းစာ ဘာသာပြန်ခြင်း ဟောပြောခြင်း သင်ကြားခြင်း အလွန်များပြားစွာ ပေါ်ပေါက်လာချိန် သမ္မာကျမ်းစာသြဝါဒကို နားလည်ပိုင်းခြား ခံယူအသက်ရှင်ဖို့ အထူးလိုအပ်နေပါတယ်။
ဘာသာပြန်ခြင်း ပြသနာများ Problem of Mis-interpretation ကဏ္ဍမှာ .. ကျမ်းစာက မပြောတဲ့စကားများ မပါဖို့. .ကျမ်းစကားများ ဟန်ချက်မညီ မဖြစ်ဖို့ Unbalance Way မျာရှောင်ရပါတယ်။ ကယ်တင်ခြင်း ဆိုတာ ကျမ်းစာမှာတော့ နောင်တရခြင်း ကနေ ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်လာပြီး ကယ်တင်ခြင်း ရရှိပါတယ်။ နောင်တမပါပဲ ကယ်တင်ခြင်း ရပြီ ဆိုရင် လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ ရပြီ ဆိုတဲ့ လွဲမှားသော သွန်သင်ချက်တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ကျမ်းစာက ကယ်တင်ခြင်း အစစ်မှန်ရရှိရင် မဆုံးရှုံးတော့ပါဘူး။ ဆာလံ ၂၃ .. ထာဝရ ကယ်တင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆာလံ၅၀း၂၃ .. နေ့စဉ်ကယ်တင်ခြင်း ကျမ်းပိုဒ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
God Speaks, Bible Translation, Bible is Perfect အကြောင်းများကိုလည်း ရှင်းပြပါတယ်။
Bible is Complete အခန်းမှာ လောကော့စ် Logos နဲ့ ရီးမား Remah တွေကို ရှင်းပြပါတယ်။
အနက်ဖွင့်ခြင်းကို တားဆီးတဲ့အကြောင်းအရာများ Hindrames to Good Hermeneutics များစွာ ဥပမာ လူ့အစွဲများ Prejudice, Pride, Laziness, လူကြိုက်များ လိုချင်ခြင်း Desire to Like, Popular စသဖြင့် ဆွေးနွေး သင်ကြားပါတယ်။
အဆုံးသပ်မှာတော့ ကျမ်းစာကို ဖတ်ပါ။ ကျမ်းပိုဒ်လေးတွေ . ကြုံသလို နေ့စဉ်လှန်လှော ဖတ်တာကောင်းပါတယ်။ စနစ်တကျဖတ်ခြင်း Reading Plan ဆိုတဲ့ တနှစ်ပြည့်ရင် ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံး တခေါက်တော့ ဖတ်ပြီးခြင်း Plan နဲ့ ဖတ်ကြစေလိုကြောင်း . .ဆရာချိုမနားလိန်း က တိုက်တွန်း အားပေးပါတယ်။ . . သင်တန်းသားတစ်ဦးက ဆုတောင်း အဆုံးသပ်ပါတယ်။.
နားထောင်ကြည့်ရှုရန် ဗွီဒီယိုလင့် Link ...
COS မြန်မာမိတ်သဟာရ ကျမ်းစာကျောင်းနေရာ.. ဒုတိယထပ် ပင်နီစူလာပလာစာ စင်ကာပူ။ 02-34 Peninsula Plaza, Singapore.
အသင်းတော်လိပ်စာ Church Of Singapore COS, 145 Marine Parade Road, Singapore 449274
CDI, Rogma Class ပို့ချသူဆရာများရဲ့ အော်ဒီယိုပို့ချချက်များ။ ဆရာတိုးစက်(East Bible School)၊ ဆရာချိုမနားလိန်း (COS)၊ ဆရာမျိုးသူ (JBCS)
မြန်မာလိုသခန်းစာများကို ဖတ်ရင်း၊ ပို့ချချက်များနဲ့လေ့လာဆည်းပူးပါ။ အမေးအဖြေများကို ဆရာချိုမနားလိန်းထံ ပို့ပေးပါ။ အဝေးရောက်ကျမ်းစာသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂ခု အဖြေလွှာများ ပို့ပေးသူများ၊ အောင်မြင်ရင် အောင်လက်မှတ်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Christian Discipleship International Bible School (Singapore)
ဗွီဒီယို အပါတ်စဉ် ပို့ချချက်။
Facebook Video Teaching link https://goo.gl/yn2ht4
CDI မှော်ဘီ အဆောက်အဦဖွင့်ပွဲ (၂၄.သြဂုတ်.၂၀၁၇) ဆရာချိုမနားလိန်း၊ ဆရာမဆူဆန်